Webdesign Ku Baro Af-Soomaali: Casharka 5aad - AqoonKaal.com
Friday, September 24, 2021 6:17 pm
Casharkan waa kii 5aad ee casharro xiriir ah oo ku saabsan naqshadaynta iyo dhismaha muuqaalka guud ee website (Webdesign ku baro Af-Soomaali) oo aad kala socotaan AqoonKaal.com..
Macalin waxaan rajaynaa casharkii 5naad inaan sameeyey haddii aan si qalad ah wax samaynin.
A/c: Waxaad samaysan website aad u bilicsan, si wanaagsan ayaadna u fahamtid casharadii ilaa hadda aan soo baranay. Mahadsanid.
Ani waxan kahelay carki hore says:
Asc walal Ani waxan kahelay casharkii hore, ee seen kubarankara web.
Asc: Walaal Cabdifataax mahadsanid. Waxaad webka ku bran karta adigoo casharadan sida ay u kala horeeyaan u bartaan. Gaar ahaan marka hore casharada HTML & CSS ku baro AfSoomaali, kaddib casharada Webdesign ku baro Afsoomaali.
waad ku mahad santahay macalin barashada aad nagu barayso luuqadeeni hooyo ajar aan la soo koobi karina alle ha kaa siiyo
Asc wr wrb.
Walaal Marka hore Kheyr ALLAAH haku siiyo sida gobonimada leh, ee aad noogu caawisay aqoontaada.
Intaa kadib walaal Casharkaan 5-aad ee “Webdesign ku Baro Afsoomaali” Ma ii shaqaynayo aniga, cilladduna ma aqaan waxay tahay marka walaal arrinkaa iga caawi. ALLAAH haku caawiyo.
FG: Markaan damco inaan daaro casharka wuxuu soo qorayaa ” Sorry, we’re unable to play this episode”
Jazzaakallaahu kheyral Jazaan.
Wallaal cillada weli ma jirta mase casharku waa kuu usoo baxat
Walaal waxaa ii shaqayn la’ Casharkaan 5-aad ee “webdesign ku baro Afsoomaali” Yacni iima daarmayo.
Markaan is idhaahdo daar wuxuu soo qorayaa kelmeddaan” Sorry, We’re unable to play this episode” Marka Ilaahay kheyr haku siiyee arrinkaa iga soo caawi.
Walaal tijaabi linkigan http://j15.video2.blip.tv/10350008882770/Aqoonkaal-WebdesignKuBaroAfSoomaaliCasharka5aad113.mp4
marka hore salaan
kadib waxaa ii downloadgaraysmiwaayay dhowr cashar oo ay mid yihiin 5/11/12/
ee ii soo dir casharadaa adoo mahadsan macalin
Walaal eeg linkigan in uu shaqeeyo http://j15.video2.blip.tv/10350008882770/Aqoonkaal-WebdesignKuBaroAfSoomaaliCasharka5aad113.mp4
Inj. Maxamed Cali Asc wr wbr. Intaa kadid walaal weli dhibkii baa iga hasyta casharka 5-aad ee “Webdesign Ku Baro Afsoomaali”
Hadda Link-ga aad iisoo dirtay waan galay Download buu samaynayaa deedna RealPlayer ayuu ku daarmayaa hayeeshee aad ayuu u culusyahay oo xattaa codkaaga buu jarjarayaa. Marka si toos ah casharka loogama faa’iideysan karo sida Casharada kale ee Website laga dhex dhegeysanayo.
Marka walaal ma loo hagaajin karaa sida kuwa kale ee 1-4 iyo 6-8 Mahadsanid Macalin.
Asc, walaal insha Allah casharkaas dib ayaan u fiirinayaa meesha arrintu ka khaldan tahay, mahadsanid.
Inj Maxamed Cali Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa hawsha aad nooqabattay haddaan Dhallinyarada Soomaaliyeed nahay iyo dabcan Soomaali oo dhan ba. Khaasattaan anigu waxaan kaaga mahadcelin casharkan 5-aad ee iga caawisay. Immikana wuu ii shaqaynayaa halkaasaana kasii wadi doonaa casharadii kusaabsanaa “Webdesign Ku Baro Afsoomaali” oo aan runtii u xayirnaa casharka 5-aad. Waxaan ku leeyahay Ilaahay Miisaanka xasanaadkaha kuugu daro abaalka aad noogashay.
ASC Waa ku faraxsanahay in uu kuu hagaagay casharku, mahadsanid.
macalin marka hore aad ayan kuusalamayaa waxaan kuleeyahay ALLE miisanka xasanaadka hakuugu daro casharrada aad isa hagar la’aanta ah ubixiso.
anigu waxaan codsan lahaa inaad noosoo samayno casharro kuwan lamid ah oo WEBSITE-KA Lagu dhisayo PHP insha Alllah
Cimraan Xassan says:
Macalin code kii ayaa ku soo qorey qorey lkn code kii caadi ayuu list u noqdey
Allah waxan kaga baryayaa inuu cilmiga cimriga iyo Caqligaba kuu barakeeyo Macalin Aakhirana miisanka xasanaad ka kugu daro Insha Allah
salaan qaali ah kadib waxaan aad ula yaabay sababta sidebarka markii aan left; iri uu midig u aadayo markii aan midig u doortana uu midig u aadayo, taasoo qalad ah. Waxaa kale oo la yaab leh in footerku uusan buuxineyn bogga dhan ee uu nus yahay micnaha ma sii jiidmayo illaa gees ka gees. ulama jeedo qoraalka footerka oo waa caadi laakiin midabka qoraalku ku dhexjiro geeska kale tegi maayo.
Raali noqo haddii aan hadalka badiyay Macalin.
linkiga webka soodir si aan eego sababta insha Allah.